Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka Oo daahfuray kulan lagu gorfeynayey wacyi-gelinta Xeerka Maareynta Xamuulka Xad-dhaafka | Dhaymoole News
Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka Oo daahfuray kulan lagu gorfeynayey wacyi-gelinta Xeerka Maareynta Xamuulka Xad-dhaafka
Hargeysa(dhaymoole)Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka Cabdillaahi Abokor Cismaan iyo Maareeyaha Ha’yadda Waddooyinka Ibraahim Siciid Cilmi ayaa maanta wada-jir u daah-furay kulan lagu gorfeynayey wacyigelin lagu samaynayo xeerka lagu maamulayo baabuurta qaadda xamuulka xad-dhaafka. Kulanka waxa soo qaban-qaabiyey ururka Somaliland Y-PEER, waxaana maal-geliyey Ha’yadda GIZ. Waxa ka soo qayb-galay gaadiidleyda kale duwan, abwaano, dirawallada baabuurta, shirkadaha gaadiidleyda, masuuliyiinka ka socda Ha’yadda Waddooyinka, GIZ iyo khubaro ku takhasustay xidhiidhka bulshada.
Ugu horeyn waxa kulankan ka hadlay Agaasimaha ururka Somaliland Y-PEER Maxamed Mahad Dhamac oo faafaahin ka bixiyey ujeeddada kulankan iyo muddada uu socon doono, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
“Ujeedada kulankani waxa uu daaran yahayh samaynta fariimaha loo adeegsan doono wacyi-gelinta xeer nimaadkeeda lagu maamulayo baabuurta qaada xamuulka xad dhaafka ah, fariimaha waxay noqonayaa qaar aynu u adeegsano wacyi-gelinta xeerkan.”
Kadibna waxa shirka si rasmi ah u furay Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka Cabdilaahi Abokor Cismaan, waxaanu Wasiirku ku dheeraaday xeerka Maamulida Gaadiidka qaada xamuulka xad dhaafka taasi oo uu wasiirku sheegay in xeerkani ka shaqeeyo waddamo badan, isagoo wasiirka arrintaasi ka hadlayan waxa uu yidhi:
Waxa isaguna kulanka ka hadlay Eng. Yaasiin Cali Aadan oo ka mid ah Injineerada Ha’yadda Horumarinta Waddooyinka, waxa uu sharaxaad ka bixiyey faa’iidada xeerkan oo ka qayb-qaadanaya nabad-galyada waddooyinka iyo shilalka baabuurta, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
“Waddooyinka waxa inaga galay maal-gelin guddeed iyo mid dibaddeedba, sidaas daraadeed Xeer nimaadkeeni waxa uu ilaalinayaa waddooyinka taasi oo saameyn badan ku yeesha culayska xad dhaafka ee baabuurtu qaada, taasi wax badan ka tari doonna isticmaalida waddooyinka muddo dheer.”
Maareeyaha Ha’yadda Waddooyinka Somaliland Ibraahim Siciid Cilmi oo isaguna hadal ka jeediyey kulanka ayaa ku dheeraaday muhiimada uu xeerkani leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay waddooyinka Somaliland, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
“Xeer nidaameedkan waa xeer ku cusub gayiga Soomaaliddu degto inta aan ogahay, waana xeer inagu cusub, balse wax weyn ka tari doonna waddooyinka Somaliland dhinacyada burburka iyo shidalalka gaadiidka.”
Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu Maareeyuhu yidhi:
“Kulankan waxaynu ku samayn doonnaa fariimo wacyi-gelineed oo kooban kuwaasi oo ay wada fahmi doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan gaadiidleyda iyo wadayaasha gaadiidka. Fariimahaasina waxay wax weyn ka tari doonaan adeegyada Ha’yadda Horumarinta Waddooyinka iyo Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka bulshada u hayaan.”
“Waxaan rajaynayaa in xeer nidaamiyahan uu noqdo mustaqbalka dhow xeer, sidoo kale dayac-tirka waddooyinka waxa inaga baxa kharash badan, kharashkaasina haddaynaan wadada illaalin wuxuu ka go’an yahay waddooyinka, burburka waddada wuxuu khasaare nafadeed iyo duunyabaku keenayaa waddanka.”
Sidoo kale, waxa uu wasiirka ka hadlay tira-koobka shilalka gaadiidka iyo dadka uu khasaaruhu ka soo gaadhay, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
“Sannadkii 2016-kii shilalka gaadiidku waxay gaadheen 5000 oo shil, waxaana ku naf waayey 165 qof, sidoo kalena waxa ku dhaawacmay 2034 qof.”
Gabgabadii kulankan waxa lagu gorfeeyey la islana meel dhigay fariimaha ugu muhiimsan ee bulshada lagula waddaagi karo.